कपीराइट दर्ता गर्न के प्रक्रिया - उद्यमी नेपाल Udhyami Nepal
कपीराइट दर्ता गर्न के प्रक्रिया
के हो कपीराइट? कसरी दर्ता गर्ने ? चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?
हिजोआज कसैले सृजना गरेको कुरालाई अरू व्यक्तिले त्यस्तै नक्कल गरेर आफ्नो सिर्जना हो भनी झुठो नाम कमाउने गर्ने गरेको भेटिन्छ। अझ व्यपार व्यावसायमा त यो कुराले झनै असर गर्ने गरेको छ। जस्तै: यदि तपाईँले पनि कुनै कला, साहित्य, चित्रकला वा पुरा पढ्नुहोस् “के हो कपीराइट? कसरी दर्ता गर्ने ? चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?”